နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြီး ပြုလုပ် သွားမယ်လို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြောကြား
ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြီး ပြုလုပ် သွားမယ်လို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြောကြား
ပြုပြင်ရေးသမားကြီး လို့ ဆိုတဲ့ သူ က စတယ်။ စစ်ဖွဲ့စည်းပုံကို လွန်ခဲ့တဲ့ (၃) နှစ်က လက်မခံခဲ့တဲ့သူတွေ အခု ဆိုရင် လက်ခံသလောက် ဖြစ်လာပြီ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှမ်ပိန်တိုက်ရင်း တည်ဆောင်နေတာ တော်တော် အောင်မြင်နေပြီ၊ ကျည်ဆံတွေ အစား ကား အသစ်တွေပဲ အော်ဒါမှာ ပေးနေပြီ၊ ဒါပေမယ့် တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေကို စစ်တပ်နည်းနဲ့ ဆက်ဖြေရှင်းဖို့ လိုသေးတယ်၊ ဒို့တပ်မတော်ကြီး အင်အား ရှိမှ ဖြစ်မယ်။
Mar 30, 2014 11:00 AM
Richard နေရပ်- US :
This puppet of the previous regime, not capable and able to manage effectively. he might have good will to do good things for Myanmar, he might have less corruption compared with other notorious Generals, but he has no capacity to beagood leader for Myanmar , this is also because the previous regime plotted and set up the current administrative body in favor of welfare of their own group. Politics is complicated and subtle, and the president needs more clever tactics, strategies, and effective managerial skill, especially mentally courageous power and strong ethical characteristics when to makeacritical decision like the role of Military in building Democracy. He seems lacking this mental power and courage. It is better to hand over toaperson who is more capable to handle political, economic, just, and administrative issues.
Mar 30, 2014 06:09 AM
Anyway,Should be welcomed with Great Caution. But events in the past have well-witnessed that they are "NOT TRUSTWORTHY"
Mar 30, 2014 04:32 AM
ဒေါ်လာငွေ ၃ဝဝ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ယူရေး
နယ်လှည့် ပါးရိုက် မည့် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ ၏ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ
Mar 30, 2014 02:43 AM
ဘာတေးလ် လစ်တနာ ပြောခဲ့သလို အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေး နဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး
ါကလဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (Peace Industry) ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီသူတွေ တယောက်ချင်းစီရတဲ့ လစာကိုသိရင် ခင်ဗျားအရမ်း စိတ်ဓာတ်ကျသွားမယ် မသိချင်ပါနဲ့လို့ အတွင်းသိ မိတ်ဆွေတဦးက ပြောဘူးပါတယ်။
သူတို့ရတဲ့ အကျိုးအမြတ်ဟာ ဒေါ်လာသောင်း ဂဏာန်းဝန်းကျင် ရှိပါတယ်၊ ဒီအထဲမှာ နေစရိတ်၊ စားစရိတ်၊ ခရီးစရိတ်တွေ မပါသေးပါဘူး။
ငြိမ်းချမ်းရေးကတော့ ဘယ်ဆီနေတယ် မသိသေးပါ၊ လင်းတကြီးတွေကတော့ ဝဲနေကြပါပြီ၊
Mar 29, 2014 11:48 PM
Thein Sein - Integrity is zero for negotiation with Minorities. Lies through out his life - keep saying 99% of people support his rubbish 2008 constitution . I am sure whatever he says will never work.
Mar 29, 2014 10:58 PM
“ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အခြေခံတဲ့ ပြည်ထောင်စုတစ်ခု
ပြုလုပ်သွားဖို့အတွက် ကျနော်တို့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်"
...ဒီလို ပြောတာနော်။ ဆွေးနွေးမှာကိုပြောတာ။ တည်ဆောက်သွားမယ်ပြောတာ မဟုတ်သေးဘူး။ ဒါ “လူလည်မိန့်ခွန်း” လို့ ခေါ်တယ်။
Mar 29, 2014 10:51 AM